दीगो इ ८ विद्युतीय कारको मूल्य घट्यो, किन्न इच्छुकले तत्कालै पाउने « Artha Path
दीगो इ ८ विद्युतीय कारको मूल्य घट्यो, किन्न इच्छुकले तत्कालै पाउने
प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०७८, बिहीबार
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी ब्रान्ड दिगोले दिगो इ८, विद्युतीय ह्याचब्याक कारको मूल्य घटाएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने महसुल र अन्तःशुल्क घटेसँगै कम्पनीले आफूसँग स्टकमा रहेका कारको मूल्य परिमार्जन गरेको छ । सरकारले गरेको यस सकारात्मक कदमको सर्हाना स्वरूप स्टकमा रहेको गाडीको समेत मूल्य परिमार्जन गरिएको दीगो इ८ कार खरिदकर्तालाई तत्कालै डेलिभरी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ मूल्य रु. २१ लाख ९४ हजार ५०० तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ बजेटमा विद्युतीय सवारी साधानको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाउने घोषणा भएसँगै मानिसहरु दीगो इ८ को नयाँ मूल्य सार्वजनिक हुने प्रतीक्षामा छन् । दीगो इ८ यस सेग्मेन्टको ज्यादै लोकप्रिय कार हो । यसकारण परिमार्जित मूल्यमा सो गाडी उपलब्ध हुने खबर विद्युतीय कार खरिद गर्ने सोच बनाइरहेका ग्राहकका लागि निकै नै सकारात्मक रहने छ ।
दीगो इ८ को पहिलो लट बिक्री भएपछि कम्पनीले बजेटअघि नै दोस्रो लट आयात गरेको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर कटौती गरेपछि कम्पनीले आफूसँग स्टकमा रहेका गाडीहरु मूल्य घटाएर बिक्री गर्ने निर्णय लिएको हो । वातावरण, अर्थतन्त्र र ऊर्जा निर्भरताको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारी साधनको लाभ निकै बढी छ । दीगो विद्युतीय सवारी साधनहरु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ ता कि हरेकले विद्युतीय सवारी साधनका लाभ लिन सकून् र हाम्रो मुलुकमा यस्ता सवारी साधनको प्रभाव यथासम्भव चाँडो अनुभूत गर्न सकियोस् । त्यसैकारण गत वर्ष यी विद्युतीय वाहनको आयातमा लाग्ने कर र महसुलहरु उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि दीगो इ८ को मूल्य उच्च नराखिएको हो । अहिले दीगो ग्रुपले स्टकमा रहेका सवारी साधनहरु घटाइएको मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको हो । यस कम्पनी मुलुकलाई हर तरहले विद्युतीय सवारी साधनको लाभ दिलाउन अहिले पनि प्रतिबद्ध छ र भविष्यमा पनि रहनेछ ।
दीगो इ८ बारे
दीगो इ८ तत्कालै मानिसको ध्यान खिच्न सक्ने ताजा डिजाइनको आधुनिक कार हो । यो आधुनिक डिजाइन र उच्चतम प्रविधिको समिश्रण हो, जसले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गर्छ । यो कारमा १५.२ किलोवाट आवरको लिथिअम ब्याट्री जडित छ । यसको मोटर क्षमता १५ किलोवाट छ । एकपटकको चार्जले सामान्य सञ्चालन अवस्था मा यो कार १५० किलोमिटरसम्म (एनइडिसी २०० किलोमिटर) कुद्छ । यो कारलाई घरको सामान्य चार्जिङ प्लग जोडेर पाँच घन्टामा पूर्ण रुपमा सजिलै चार्ज गर्न सकिन्छ । दीगो इ८ को प्रतिकिलोमिटर बिजुली खर्च सामान्य सञ्चालन अवस्थामा १ रुपैयाँ १० पैसा मात्रै पर्छ ।
अशोक लेलैण्डका ९ थान दमकल प्रदेश नं. २ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा. ली. द्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्डले प्रदेश
कोरोना नियन्त्रको लागी नाडाले दियो यी मेडिकल सामान
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले कोरोना नियन्त्रणको लागी स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको छ । देशव्यापी
निषेधाज्ञाको पहिल्लो दिन निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने १९ सय सवारी साधन होल्ड
काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोसो लहर फैलिए संगै उपत्यकामा आज विहान ६ बजेबाट निषेधाज्ञा गरिएको
बजाजको नयाँ शोरुम अब बल्खुमा
काठमाडौ । नेपालका लागि बजाज मोटर साइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले बल्खुमा
अब बजारले नै बैंकहरूलाई मर्जरमा जाने बाध्यता सिर्जना